06 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ62019
88 ။ က "တူရကီ-တရုတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်" ၏ဒုတိယနေ့၏နယ်ပယ်အတွင်း Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသော Izmir နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနေ့ရက်များကျင်းပခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်များ၏ဖိုရမ် Izmir နှင့်ချန်ဒူးကောင်းသောစာတစ်စောင်၏ဖွင့်ပွဲမှာစကားပြောသောတမြို့မြို့တော်ဝန် Soyer အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး, "တရုတ်နှင့် [ပို ... ]
ဒီနှစ် 26 50 12 မီတာအသစ်ကဘတ်စ်ကားထည့်သွင်းထားပါတယ်တဲ့ microbus နှင့်ဘတ်စ်ကားယာဉ်ပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းကြောင်း Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Burulaş 25 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ။ Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြေခံအကျဆုံးပြဿနာအစွန်းရောက်ဖြေရှင်းနည်းများ [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan, Gayrettepe-အစ္စတန်ဘူလ်-အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်လေဆိပ်က Metro လိုင်း Hasdal ကြည့်ရှုပုဒ်မဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးခြင်းနှင့်ပြီးမြောက်ခြင်းစစ်ဆင်ရေးအလင်း၏အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်သည်။ ဒီနေရာတွင်ကသူ့မိန့်ခွန်းမှာမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများဖြေရှင်းရေးအတွက်အစ္စတန်ဘူလ် 17 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်က Turhan ၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော [ပို ... ]
ကျော်နှင့်အတူအခွန်စည်းကြပ်ဆောင်းရာသီ IETT ကိုတိုးပှားဖို့ကင်ပိန်း
IETT ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအချိန်ဇယားကျောင်းများတနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ9ကနေဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သို့ဝင်။ နွေရာသီကာလအတွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၏အရေအတွက်သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ် metrobus ဘတ်စ်ကားတိုးလိမ့်မည်။ affiliates ၏ IETT အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေသစ်ပညာသင်နှစ်၏အစအဦးမှာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ [ပို ... ]
Mevlana Interchange အသွားအလာတဖန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်း, Dervişoğluလမ်းချိတ်ဆက်လက်နက်ကျောင်းမစတင်မှီအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်တော်လှန်ရေးရိပ်သာလမ်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းနှင့် Salim ၏Kuruçeşme Plajyolu လိုင်းတစ် link ကိုပေး, အပေါ်လာတာဟာအရင်သွားဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအလုပ်များအတွက်အလှည့်ကိုချွတ်ဖို့ Izmit Mevlana လမ်းဆုံ။ တိုတောင်းသော [ပို ... ]
Zama ပို့ဆောင်ရေး Kocaeli အတွက်ဆိုက်ရောက်
Kocaeli အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာတွင် Seka Park ဟိုတယ်၌ပြုလုပ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ခွသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရောက်ရှိမည်ရန်မျှော်လင့်yapıldı.toplant။ အသစ်တွင်အခကြေးငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေး၏ရလဒ်အဖြစ် ကြောင့်ရေရှည်မှာလောင်စာဝယ်လိုအားအတွက်တိုးဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမဝါယမ၏အချိန်အစည်းအဝေးရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ တစ်ခုမှာအစည်းအဝေးယနေ့ [ပို ... ]
ဧဝံဂေလိတရား၏ Samsunspor ထောက်ခံသူ! အခမဲ့ဓါတ်ရထားတနင်္ဂနွေ
ပရီးမီးယားလိဂ်ကြောင်းတနင်္ဂနွေ Samsunspor ထောက်ခံသူများအဘို့အဖွင့ ်. ၎င်း၏ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ကိုလယ်ပေါ်တွင်ဂိမ်းပရိတ်သတ်တွေYılport Samsunspor ရာသီရဲ့ပြည်တွင်းကနဦးစိတ်လှုပ်ရှားမှုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ရာသီသစ် '' ချန်ပီယံ '' စကားဝှက်ကိုကိုက်ညီ Pendikspor ဖို့အခမဲ့လမ်းရထားကိုသုံးနိုင်သည်ကြေညာခဲ့သည် Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Mustafa Demir, [ပို ... ]
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို၏ဒေတာ 594 ကီလိုမီတာနှင့်အညီ, တူရကီအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်သည့်မီးရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UIC) ။ တူရကီ,9ကမ္ဘာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆဲအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကွန်ရက်က။ အဆင့်။ လိုင်းများ 1153 ကီလိုမီတာ၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး။ ဤရွေ့ကားလိုင်းများ [ပို ... ]
Sapanca Hasanpaşaရပ်ကွက်နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ကြိုးတပ်စီမံကိန်းဖို့ဧရိယာ၌နေထိုင်နိုင်ငံသားများ၏ Mahmudiya başlattıkarအဆိုပါ Mahmudiya ရပ်ကွက်အတွင်းတိုးချဲ့ Kirkpinar Hasanpaşaရပ်ကွက်အတွင်း ropeway စီမံကိန်းကိုမှစတင်ကာ .. ထိုင်ဆက်လက်အဆိုပါဧရိယာတွင်နေထိုင်သူများနိုင်ငံသားများ၏ဆောက်လုပ်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်, နှစ်ရက်မတိုင်မီ [ပို ... ]
Sinciang ဧရိယာဖှံ့ဖွိုးတိုးကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမှာလှုံ့ဆျောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားရေးယဉ်ကျေးမှု၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ပထဝီဤဒေသတွင်မဟုတ်ဘဲတူရကီတရုတျပြိုကွဲဖို့တူရကီ၏ဇာတိမြေ, နှင့်အာရှရာစုတူရကီအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတရုတ်အစိုးရအကြားတံတားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ [ပို ... ]
Air ကို Mixing အပေါ် Viransehir '' မရဏ၏တံတား ''
115 အတွက်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, Sanliurfa ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကျေးလက်နေရပ်ကွက်အတွင်းခဲ့သည့်အများဆုံးဝေးလံခေါင်ဖျားကျေးလက်နေရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Mardin န့်သတ်ချက်အနေဖြင့်ကီလိုမီတာနှင့် '' မရဏ၏တံတား '' ၏ဒေသကလူအစားသူတို့ရေတိုကိုခေါ်သစ်တစ်ခုတံတားဆောက်လုပ်ရေးတံတားဖွင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ် [ပို ... ]
DENiZLiLiLER ပိုမြန်သည်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲသစ်ကိုပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်ထဲဝငျဖို့စတင်နေပြီတတ်နိုင်နှင့်အဆင်ပြေတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးထားပြီးခရီးသွားလာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးစတင်ခဲ့တယ်။ Metropolitan ကျောင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမှရွှေ့မည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခွန်၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ [ပို ... ]
စစ်တပ်အတွင်းရှိ2ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၌တည်၏။ ကာလစတင်
အဆိုပါခရိုင်မြို့တော်မြူနီစီပယ် Project မှAltınordu2ခြင်းဖြင့်အစပျိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြည်းတပ်။ ဇာတ်စင်ဘဝသို့ရောက်ကြ၏။ လေ့လာမှုမှတဆင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေ့လာမှု၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစျသိမျ့လာသောကြောင့်နိုင်ငံသားများ, ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာလည်းထင်ရှားစေ Mehmet [ပို ... ]
Antalya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Tools များထဲမှာ Checked
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ Antalya ၏အနောက်ဘက်ခရိုင်အတွင်းရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ခရီးသည်တင်ဆောင်ဘို့, စီးပွားရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်များအဘို့အထိန်းချုပ်မှုကိုပြု၏။ အထူးသဖြင့်စာရင်းစစ်အတွက်ခရီးသည်များ၏လုံခြုံရေးအတွက်ယူရမည်ဟုပစ္စည်းကိရိယာ check လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန [ပို ... ]
နိုင်ငံသားတွေကအသွားအလာစီးဆင်းမှုအတွက်လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဂရုစိုကျပိုအဆင်ပြေဘဝ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, သွားလာနိုင်သောအများအပြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကိုအဘယ်သူသည်။ အထူးသဖြင့်အသစ်သောပညာသင်နှစ်ကျောင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာများစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၏မစတင်မှီ [ပို ... ]
affiliates ulaşımpark Inc. မှ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစတင်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုဖြင့်အားကစားကွင်းဒီနှစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ရာသီသစ်အတွက်7မေလ 2019 19.00 ပွဲ Kocaelispor စောင့်ကြည့်ဖို့ Fethiyespor အားကစားကွင်းနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စနေနေ့တွင်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
Bursa Bursa ၏စီးတီးပြတိုက်တွင်ခင်းကျင်းပြသသည်အရေးကြီးသောတန်ဖိုးများကိုတဦးနှင့်ကုန်စည်လူမျိုး '' ဗိုလ်ကြီး Izzet '' အသိအမှတ်ပြု Izzet အလံအကြားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Bursa စီးတီးပြတိုက်တွင်များကလှူဒါန်းခဲ့သည် '' ဗိုလ်ကြီး Izzet ကုန်ပစ္စည်းများ, ထောင့်လှည့်ပတ်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူဓါတ်ပုံများနှင့်အမှတ်တရများ, ဒဏ္ဍာရီကပ္ပတိန်၏စိတ်နှလုံး [ပို ... ]
လိုအပ်သောအစီအမံအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သစ်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းတစ်နှစ်ရဲ့ start မှာတနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ9အပေါ်မည်သည့်ယာဉ်ကြောပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ IMM ယာဉ်ထိန်းရဲများနှင့် gendarmerie ၏စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ 06: 00-14: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအကြား 00 နာရီအခမဲ့သင်အားငါပေးမည်။ ဘတ်စ်ကား, [ပို ... ]
88 ။ က "တူရကီစီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်" အတွင်းဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးများ၏ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသော Izmir နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနေ့ရက်များအဲဒီ session နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ TC, Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အိမ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်İZFAŞ 88 နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ [ပို ... ]
တာဝန်များ၏ဖော်ပြချက်ဖိတ်ခေါ်မည်သည့်မတော်တဆထိခိုက်မှု, Zonguldak မြူနီစီပယ်နှင့်အဝေးပြေးကားကိုရှောင်ရှားဖို့လာမယ့် TCDD အတွက် Zonguldak မြူနီစီပယ်Yavuzyılmazပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဖြတ်၏ CHP Zonguldak ဒုတိယဝန်ကြီး, တုံ့ပြန်မှု TCDD ထံမှလာ၏။ TCC အဆင့်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တော်တပြင်လုံးကိုကယ်ဖို့ဖော်ပြထား [ပို ... ]